China ọkachamara abụọ ejiri diode laser ntutu mwepụ igwe maka ahụ dum emepụta na suppliers |Ụgbọ ala
ọkachamara abụọ ejiri diode laser ntutu mwepụ igwe maka ahụ dum
Mwepụ ntutu diode laser bụ ugbu a teknụzụ iwepụ ntutu kachasị elu na ahịa.Uru ya bụ na usoro ntutu isi na-adị mma nke ukwuu, ọ dịghị ihe mgbu ọ bụla, na mmetụta iwepụ ntutu isi dịkwa oke mkpa.Diolasheer Ice 1200pro nwere aka abụọ.Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ aka nke nha na ike dị iche iche dị ka mkpa ha si dị iji kwado ọgwụgwọ nke akụkụ dị iche iche nke ahụ
Ike nke aka 600-2000W nhọrọ
ogologo ife efe 755nm+808nm+1064nm
Igwe ihuenyo 12.1 inch
Aka ihuenyo 1.54 inch
Njupụta ike 1-120J/cm2(Ngbanwe≤±2）
Ogologo obosara usu 1-200ms
Nha ntụpọ 12 * 12mm;12 * 20mm;12 * 24mm;12 * 28mm
Ugboro ugboro 1-10HZ(600-1200w),1-20HZ(1600-2000w)
Sistemụ jụrụ oyi Sistemụ jụrụ oyi nke TEC
Nha ịbụ 57kg
Akụkụ 470*500* 1330mm
Nha ngwugwu 530*492*1120mm
Nkọwapụta fiusi Ø5×25 10A
Voltaji AC220V± 10% 10A 50HZ, 110v±10% 10A 60HZ
Ike dị iche iche dị iche iche na nha ntụpọ dị iche iche dị iji gboo mkpa ọgwụgwọ nke akụkụ dị iche iche nke onye ahịa
Ịbịaru ike iru NDỤMỌDỤ ihu pụrụ iche na-enye ohere ọgwụgwọ nke ike iru ebe, gụnyere ntitị imi na glabella.
20HZ ULTRA-Fast Ugboro
Ugboro kachasị nwere ike iru 20 Hz, nke pụtara na a na-emepụta laser ugboro 20 kwa sekọnd. Ọsọ ọgwụgwọ ahụ dị okpukpu abụọ karịa ngwaahịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ụkpụrụ nke diode laser iwepụ ntutu isi na-adabere na nhọrọ nke photothermal decomposition .Melanosomes na ntutu isi nwere ike ịhọrọ ike nke laser.Ike laser nke igwe na-ewepụta na-adị ngwa ngwa site na ntutu isi na-acha acha na-emebighị anụ ahụ epidermal.Ike nke laser na-ewepụta na-etinye uche na ntutu isi na pigmenti dị na ntutu isi. Ọ na-agbanwe ka ọ bụrụ okpomọkụ, si otú a na-amụba okpomọkụ nke ntutu isi. , na ntutu ga-atụfu ebe mbụ ya ma wepụ ya kpamkpam.
Ogologo ogologo ụzọ atọ, nsonaazụ kacha mma maka ụdị anụ ahụ na ụdị ntutu niile
755nm na-enye ume ike karịa site na melanin chromophore, na-eme ka ọ dị mma maka ntutu isi na-acha ọkụ na nke dị gịrịgịrị.Ọ na-elekwasị anya na mpụta nke ntutu isi na ọ dị irè karịsịa maka ntutu agbakwunyere elu.
808nm bụ ogologo ogologo ogologo oge na mwepụ ntutu laser, ogologo nke 808nm, na-enye ntinye miri emi nke ntutu isi na ike dị elu, dabara maka ọtụtụ ụdị anụ ahụ na ụdị ntutu.
1064nm wavelength bụ ihe e ji mara ntanye melanin dị ala, na-eme ka ọ bụrụ ihe ngwọta lekwasịrị anya maka ụdị akpụkpọ anụ ndị gbara ọchịchịrị. N'otu oge ahụ, 1064nm na-enye ntinye miri emi nke ntutu isi.
Sistemụ nlekota ọnọdụ okpomọkụ nwere ọgụgụ isi etinyere ihe mmetụta okpomọkụ na aka.Nleba anya n'ezie nke elu okpomọkụ nke oghere ọkụ aka wee gosipụta ya na ihuenyo njikwa
Sistemụ refrigeration dị elu efere abụọ semiconductor jụrụ oyi, 108w ike jụrụ oyi, ihu igwe dị elu nke ite ahụ nwere ike iru -30 Celsius.
Sistemụ eji akọ eme ihe
Onye na-arụ ọrụ kwesịrị ịhọrọ akụkụ na agba akpụkpọ ahụ ka a na-emeso ya na usoro ahụ ga-emepụta usoro ọgwụgwọ akwadoro na-akpaghị aka Ọbụna onye ọrụ na-enweghị ahụmahụ nwere ike ịghọta ọrụ nke ngwa ngwa.
20 Nlebaanya ọgụgụ isi oge
Igwe ahụ dum nwere ọrụ nchọpụta 20 nwere ọgụgụ isi, gụnyere nchọpụta mmiri na-asọpụta, nchọpụta mmiri mmiri, nchọpụta okpomọkụ, njikwa ọnọdụ njikọ, nchọpụta ọkwa mmiri, nchọpụta ọrụ akwụkwọ jụrụ oyi, wdg.
4Nzacha echekwabara anọ
A na-etinye aka nke ọ bụla na usoro nzacha mmiri nke okpukpu abụọ dị elu.Usoro nke mbụ na-anabata owu PP iji kpochapụ ihe ndị na-adịghị ọcha ma gbochie mgbochi laser, ọkwa nke abụọ na-eji ihe nzacha lon pụrụ iche na-ehichapụ ion ígwè, na-ezere corrosion laser n'ime na ịgbatị ndụ usoro ndụ.
Nke gara aga: 2021 China New Design Ultrasonic Slimmer - 40KHz ultrasonic cavitation slimming abụba gbawara hip na-ebuli ukwu na-eweghachite igwe – Nubway
Osote: Igwe ihe nlegharị anya maka ọnụ ahịa igwe emsculpt
Multifunctional 808nm diode laser ngwa ngwa ntutu rem ...
3000W Vertical diode laser 808NM iwepụ ntutu m ...
Ọkachamara 3 wavelength 808nm diode laser hai ...
808nm Diode Laser igwe maka iwepụ ntutu na-enweghị mgbu
Teknụzụ mkpochapụ ntutu laser ice kacha mma nke 1200W
Ugboro abụọ ejiri 808nm diode laser iwepụ ntutu m ...